Isku darka dawooyin badan oo laga dhex samayn doono dawada coronavirus – Radio Damal
Dr John Wright oo ka tirsan Bradford Royal Infirmary (BRI) ayaa sharraxaya qaar ka mid ah tijaabooyinka socda si loo helo daawo Covid-19, wuxuuna soo jeedinayaa in iskudarka saddex nooc oo daawo ah ay wax weyn ka beddeli karto xaaladda.
BRI waxay hadda ka qeyb qaadaneynsaa sideed tijaabooyin caafimaad oo kala duwan si ay isugu deydo inay daaawo u hesho covid-19.
Waxaan qayb ka nahay dedaal ballaadhan oo caalami ah. Waxay u egtahay in dhammaan qalabbadii saynisku isha ku hayaan sidii loola tacaali lahaa feyraskan aan muuqan.
Tijaabooyinka ugu weyn ee aan ku lug leenahay waa tijaabada Soo kabashada. Dhab ahaan in ka badan 10,000 bukaan ayaa laga shaqaaleysiiyay waddanka oo dhan waxayna qaadanayaan qaar ka mid ah daawooyinka.
Toddobaadkii hore ee BRI waxaan shaqaaleysiinnay bukaankii ugu horreeyay ee UK oo sababtu ahayd bal in daawo cusub oo ay sameysay AstraZeneca ay tahay mid badbaado leh iyo waxtar leh lagu tijaabiyo. Tani waa mid ka mid ah dhowr tijaabooyin yaryar oo la rabo in laga soo dhexsaaro ta saxda ah ee daaweynta noqon doonta.
Rejada ayaa ah in dawadan AstraZeneca, oo aan wali magac yeelan, ay gacan ka geysan doonto hoos u dhigida falcelinta halista ah ee nidaamka difaaca ee ku dhaca tiro aad u yar oo bukaannada ah, taas oo marka fayrasku soo galo jidhka kala xidha xubnaha muhiimka ah, sida sambabaha, wadnaha, xididdada dhiigga iyo kelyaha.
Isku-darkaan waxaa ka mid noqon kara dawada lidka-fayraska, iyo dawada ka hortagga bararka ama caabuqyada. Dhakhaatirtani waxay rejo ka qabaan in waxa ay qaban doonaan dhawaan dadka anfacayo, oo rejo fiican ayay leeyihiin.
Prof John Wright, oo ah dhakhtar bartay cudurada faafa, waa madaxa Machadka Bradford ee Daraasaadka Caafimaadka, isagoo ahaa dhkhaatiirtii la tacaalaysay cudurka daacuunka, HIV iyo Ebola kolkii ay ku faafeen waddammada saxare xigeenka ah ee Afrika. Wuxuu qoray xogtan uu ugu talagalay BBC.
Waxay umuuqataa mid sii kordheysa inaysan macquul aheyn in hal daawo uu daweyn doono Covid-19. Waa isku-darka daawooyin badan taas oo aynu kaga adkaannay horena Qaaxada – oo ay kujirto dawooyin isku-dhafan – iyo HIV – iyo iskudarka dawooyinka lidka-loo yaqaan ‘antiretrovirals’ – waxaanan filayaa inay noqon doonto habka aan uga adkaano cudurkan sidoo kale.
Lataliye BRI ah oo la yidhaahdo Dinesh Saralaya ayaa dareensan isla mar ahaantaana rajo wanaagsan ka qaba in daaweyn isku dhafan la heli doono ka hor dhamaadka xagaaga.
Waxaan qabaa inaynu heli doonno ugu yaraan laba ama saddex daawooyin oo ka hortegi doona bukaannadan waligood u baahan inay cusbitaal galaan,
“Waxaad tagi doontaa xarunta baaritaanka ka dibna waxaa lagu siin doonaa dawooyinka mar alla markii lagaa helo. Marka la eego istaraatiijiyadaha hadda jira, waxaad qaadaysaa fayraska’, kaddibna waad is-go’doomaysaa, hadhawna waabad kasii daraysaaba, oo waxaa kacaya heerkulkaaga, haddana waxaad bilaabaysaa in neeftu kugu dhegto. Taasi xal maaha, waxaana dadku waxay u baahan yihiin in dawooyinka la siiyo goor hore. ”
Waa maxay talaalka coronavirus?
Talaalku sidiisaba waxa uu habdhiska difaaca ee jidhka u diyaariyaa sidii uu uga hortagi lahaa in cudur ku dhaqo qofka sida Covid-19 oo kale ah.
Haddii dad badan oo dunida ku nooli ay adkaysi u yeeshaan waxay arintaasi coronavirus ka horjoogsan doontaa inuu fido oo in dadku kala fogaadaan na qasab noqon mayso.
Qiyaastii 80 kooxood oo dunida oo dhan ku kala filiqsan oo ay ku jiraan shirkadaha waaweyn ee dawooyinka sameeyaa, ayaa ku foogan sidii ay talaal u heli lahaayeen qaarkoodna durba waxay marayaan tijaabadii lagu eegi lahaa aadamaha.
Cilmi baadhistan dunida ka socotaa aad bay u xawli badan tahay, hawl sannado qaadan lahayd ayaa lagu soo koobay bilo.